XOG CUSUB: Axmed Madoobe oo digniin kulul ah u soo diray Madaxweynaha iyo Ra'iisal wasaaraha - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. XOG CUSUB: Axmed Madoobe oo digniin kulul ah u soo diray Madaxweynaha iyo Ra'iisal wasaaraha - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
XOG CUSUB: Axmed Madoobe oo digniin kulul ah u soo diray Madaxweynaha iyo Ra’iisal wasaaraha
Madaxweynaha maamulka Jubba Axmed Maxamed Islaan (Axmed Madoobe) ayaa markii ugu horeysay soo farageliyay qaabka ay u socoto magacaabidda iyo soo xulitaanka Golaha wasiirada cusub ee xukuumadda Ra’iisal wasaare Cumar C/rashiid Cali “Sharma’arke”, isagoo farriin digniin culus ah u soo diray Madaxweynaha iyo Ra’iisal wasaaraha.
Farriinta oo dhinaca isgaarsiinta ahayd ayuu ku sheegay Axmed Madoobe haddii aan jagooyinka Ra’iisal wasaare ku xigeen iyo Wasiirka Maaliyadda la siin Xuseen Cabdi Xalane sidii uu ka balanqaaday madaxweyne Xasan Sheekh inuu qaadi doono tallaabo adag oo uu xiriirka ugu jarayo dowladda Federaalka.
Axmed Madoobe ayaa la sheegay in farriintiisa si toos ah u gaartay madaxweynaha, halka Ra’iisal wasaaraha wakiilkiisa uu gaarsiiyay markii uu ku haleeli waayay Telefoonka. Arrintan oo culeys kale ku sii kordhineysa CCC ayaa waxaa sii xoojinaya xildhibaano ka soo jeeda Gobolka Waqooyi Bari ee Kenya iyo wakiilka IGAD ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Afey oo taageeraya Axmed Madoobe iyo musharixiisa Wasiir Xalane.
Previous articleXOG CUSUB: Golaha wasiirada ee muranku ka taagan yahay oo lagu wado in lagu dhawaaqo
Next articleIGAD Council of Ministers Communiqué: 53rd Extra-Ordinary Session of Council of Ministers, Mogadishu
Safiirka Sacuudiga usoo magacaabay Soomaaliya oo lagu qaabilay Wasaaradda Arrimaha Dibadda